[Vaovao maraina] Talata 19 janoary 2021
Anio tolakandro no hiditra an-tanety eto Madagasikara ilay rivodoza Eloise, nitombo hery izy ka lasa "Forte tempête tropicale", raha ny vaovao farany voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany maraina.
[Vaovao hariva] Alatsinainy 18 janoary 2021
Naseho ny : 18 janoary 2021
♦ Feno ireo loholona valo ambin'ny folo mandrafitra ny Antenimierandoholona izay hiasa mandritra ny dimy taona. Niara-nampiaka-tsaina farany tamin'ireo mpiasan'ny Antenimierandoholona androany Andriamatoa Rivo Rakotovao... ♦ Any amin'ny 450km atsinanan'Antalaha no misy an'i Eloise. Tombanana hiditra an-tanety rahampitso alina na ny alarobia maraina...
[Vaovao antoandro] Alatsinainy 18 janoary 2021
Manatona haingana ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ilay rivodoza Eloise, ao amin'ny Ranomasimbe Indiana. Rahampitso alina, na amin'ny alarobia maraina izao no hiditra an-tanety ao Analanjorofo izy.
[Vaovao maraina] Alatsinainy 18 janoary 2021
Valan'aretina Covid-19 : ny eto amin'ny Faritra Analamanga no ahitana fifindran'ny tsimokaretina be indrindra eran'i Madagasikara. Nitombo avo roa heny amin'ny tarehimarika teo aloha mantsy ny tranga vaovao, raha ny tatitra ôfisialy nivoaka omaly. Ny Faritra Matsiatra Ambony kosa no manaraka azy.
Pejy 3 amin'ny 105